सगुनको २ करोड डलर बराबरको मिनी आइपिओ खुल्यो | Arthatantra.com
सगुनको २ करोड डलर बराबरको मिनी आइपिओ खुल्यो
काठमाण्डौं । सामाजिक सञ्जाल सगुनको सेयर बिक्री खुला भएको छ। सर्वसाधारणबाट २ करोड डलर संकलन गर्ने उद्देश्यले सगुनले अनलाइन प्रणालीमार्फत सेयर बिक्री खुला गरेको हो। बिहिबारदेखि संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेका व्यक्तिले यसमा लगानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
एक हप्ताअगाडि मात्रै संयुक्त राज्य अमेरिकाको धितोपत्र कारोबार आयोगले सगुनलाई सेयर निश्कासनको स्वीकृति दिएको थियो । उक्त स्वीकृति पश्चात कम्पनीले ग श्रेणीको ८ लाख ६९ हजार ५ सय ६४ कित्ता साधारण सेयरलाई प्रतिकित्ता २३ अमेरिकी डलरमा बिक्री सुरु गरेको हो। यसको सेयरधनी बन्नका लागि कम्तीमा १३ कित्ता अर्थात २ सय ९९ डलरको किन्नुपर्नेछ।
सेयर बिक्री सुरु गर्नुअघि कम्पनीले लगानीको लागि प्रतिबद्धता आह्वान गरेको थियो। जसमा अमेरिका, क्यानडा, भारत, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, युएई, इजरायल, लगायत देशबाट ४ हजारको संख्याले ७० लाख डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
विदेशमा लगानी गर्नेसम्वन्धी कानून नभएकाले नेपालभित्रबाट भने सगुनमा लगानी गर्न पाइँदैन। नेपालबाहिर रहेका गैरआवासीय नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्नेछन्।
२७ माघ २०७३, ११।००
माघमा मात्रै ४ अर्बको आईपिओ बजारमा, हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको कती ? काठमाडौ । सेयर बजारमा माघ महिनामा मात्रै करिब ४ अर्ब रुपैया भन्दा बढीको विभिन्न कम्पनीको […]
बजारमा आयो करिब ८० लाख कित्ता सेयर काठमाण्डौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा यस साता पाँच कम्पनीको बोनस र हकप्रद गरि ७९ लाख ९७ […]
फाइनान्सको आठ लाख ८७ हजार चार सय ६३ कित्ता सेयर बजारमा आउँदै काठमाण्डौं । सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडले पुस ११ देखि माघ १७ गतेसम्म बेचेको असी प्रतिशत […]
हालै ५% बोनस पाएकाहरुलाई शतप्रतिशत हकप्रद भर्ने अर्काे अवसर ! काठमाडौ । नेपाल इन्स्योरेन्सले शतप्रतिशत अर्थात एक बराबर एकको अनु्पातमा हकप्रद सेयर […]
इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिँदैछ २ः१ अनुपातमा हकप्रद र १३ करोडभन्दा रुपैयाँभन्दा बढी बोनस सेयर काठमाण्डौं । एशियन लार्इफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजीको २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद […]